दोहावाट पार्टी एकता चिहाइरहेकी पूर्व लडाकु कम्रेड सुरक्षा - Kendrabindu Nepal Online News
दोहावाट पार्टी एकता चिहाइरहेकी पूर्व लडाकु कम्रेड सुरक्षा
३ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १९:३०
आज ऐतिहासिक दिन । नेपालमा सरकारमा रहेका दुइ ठुला दल माओवादी र नेकपा एमालेको एकता भएको दिन । माओवादी जनयुद्धलाई सम्पूर्ण रुपमा स्वीकार गरेर एमालेले जनयुद्धलाई मान्यता प्रदान गरेको दिन । जनयुद्धका तमाम सहिदहरु र आफ्नो प्राणको आहुति दिनको लागि तम्तयार भएर युद्धमा होमिएका योद्धाहरुको पार्टी अर्को त्यस्तै ठुलो पार्टीमा समाहित भएको दिन ।
एकताको बिषयलाई थाँती राखेर एकपटक योद्धाहरु कता छन् ? कस्तो अवस्थामा छन् ? भनेर खोज्ने जमर्को गरियो आज । यत्तिकैमा भेट हुन पुगिन कमरेड सुरक्षा या नि गायिका नानु घले ।
बैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा अहिले कतार देशको राजधानी दोहामा कार्यरत रहेकी ‘कमरेड सुरक्षा’ पुर्व माओवादी लडाकु हुन् । सोह्र बर्षकै उमेरमा देश र जनताको मुक्तिका खातिर बन्दुक बोकेर युद्धमा होमिएकी नानु घलेलाइ पार्टीले प्रदान गरेको नाम हो ‘कमरेड सुरक्षा’ ।
राजनीतिमा पटक्कै चासो थिएन नानुलाई । त्यसमाथि अझ युद्धको बारेमा त उनी अनभिज्ञ नै थिईन् । तर परिस्थिति त्यस्तै आइ पर्यो । भूमिगत भएका साथीहरु आए र स्कुल ड्रेस मै उनलाई लडाईं गर्नुपर्छ भनेर लिएर गए । कसको लागि लड्ने भनेर प्रश्न गर्नु अगावै उनलाई गरिब र दुखि जनताको मुक्तिको लागि लड्ने र देशमा गरिवको राज्य स्थापना गर्ने भनेर तालीम दिईयो । उनी आफु यसै गरिव छदै थिईन् । गरिवको लागि लड्नु आफ्नै लागि लड्नु जस्तै लाग्यो र उनी होमीईन् ‘जनयुद्ध’मा ।
आफू सानै छँदा आमा गुमाएकी नानु सौतेनी आमाको दलनमा हुर्किएकी हुन् । परिस्थितिले मलाइ टुहुरी बनायो र त्यही कारणले नै म जनयुद्दमा लाग्नु परेको हो कि ? पुराना दिन सम्झदै उनले लख काट्न् ि। सायद जन्मदिने बाबा आमा साथमा भईदिएको भए मलाइ लुकाउन पो सक्थे कि । मैले बन्दुक बोकेर हिड्नु पर्ने थिएन कि र जिन्दगी आज जस्तो नभएर अर्कै किसिमको पो हुन्थ्यो कि ? यो उनको परिकल्पना मात्र हो, साँच्चै लडाकु नभएको भए अहिले उनी के हुन्थिन् ठ्याक्कै अनुमान गर्न उनी पनि सक्दिनन् ।
आफ्नै जिन्दगीको अनेक आरोह–अवरोह खेपिरहेका बेला नानुलाई माओवादीले ललाइ फकाईमा पारेर बन्दुक बोकाएको थियो । तर युद्ध धेरै समय चलेन, नानु घले ‘कमरेड सुरक्षा’ भएको केही समयमा नै देश शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्यो । उनी चितवनको शक्तिखोरमा रहेको आधार शिविरमा पुगिन् ।
कतिपय युवा युवतीलाई माओवादीले आफ्नो संख्या देखाउनको लागी समेत प्रयोग गरेका थिए । नानु सम्झिन्छिन्– ‘लडाकु गणना भइरहेका बेला मलाई शक्तिखोरमा राखिएको थियो । एक वर्षको अन्तरालमा दुइ पटक प्रमाणीकरण प्रक्रियामा उनलाई उभ्याईयो दुवै पटक उनि उत्तीर्ण भईन् । खासमा उनको इच्छा अनुसार ‘हेल्थ असिस्टेन्ट’ पढाउने र युद्धमा बिमारी भएका लडाकु अथवा युद्धको कारणले बिमारी भएका सर्वासाधारण जनताको उपचार गर्ने भनेर लगिएको थियो । तर केही पनि भएन, उनले हेल्थ असिष्टेन्ट पढ्न पनि पाइनन् । अनि शक्तिखोरमा एक वर्षभन्दा बढी बसेपछि उनी भागेरै बाहिर आइपुगिन् ।’
नानुको जीवन कहानी पनि उस्तै विचित्रको रहेछ । शक्तिखोर शिविरबाट निस्केर उनले चितवन बाटै एसएसली परीक्षा दिएकी थिइन् । लगत्तै परिस्थितिले उनलाई घरबार पनि दियो । बिहेको कहानी लामो छ, तर गुनासो गरेर हुने वाला केही पनि छैन । परिवान्दमा परेर बिहे गरेकी नानुका श्रीमान् नेपाली सेनामा जागिरे थिए ।
ती सैनिकसँग बिहे गरेर एउटा छोरो भइसकेपछि मात्रै उनले थाहा पाइछन् –आफ्नी सौता पनि छन् घरमा भनेर । सौता त्यो पनि यौटी होइन दुई दुई वटी । त्यसपछि अझ थाहा हुँदै गएछ– सौता मात्रै होइन, अरू धेरै युवतीसँग रमाउन चाहाने चरित्रका रहेछन् उनका श्रीमान् । आफ्नै गाऊ ठाऊ र कार्यरत रहेका स्थानमा उनका श्रीमान्संग नाम जोडिएका थुप्रै युवती रहेको उनले चाल पाइन् । बिहेको नाउमा आफु गम्भीर धोकामा परेको कुरा उनले पहाडमा श्रीमान्को घरमा पुगेपछि बल्ल बुझिन् ।
तर घले आफु मिलनसार मान्छे हुन् । उनको प्रकृति निकै शान्त किसिमको छ । भाग्यले जे पार्यो पार्यो अब यही अवस्थालाई सुधार गर्नु पर्छ भनेर उनले जेठी दिदी (सौता) संग सम्बन्ध सुधार्न पहल समेत गरिन् । उनकी सौता पनि त्यस्तै शान्त प्रकृतिकी थिईन् । जति दिन संगै बसे उनीहरु मिलेर बसे । एकजनाले भाँडा माझ्दा अर्कोले पखाल्न सहयोग गरेरै बसे ।
एक पटक नानु आफ्नो श्रीमानको नैतिक र चारित्रिक हर्कतका बारेमा उजुरी गर्न हनुमानढोका प्रहरीकहाँ पुगेकी थिईन्, तर सैनिकको मुद्दा प्रहरीले नहेरेपछि उनी पÞmर्कीइन्,’ । यसरी आफ्नै भाग्यसँग लडिरहेकी नानुको अहिले सम्म श्रीमान्संग सम्बन्ध सुधारिन सकेको छैन । अब सुधारिदैन होला सम्बन्ध, बिस्तारै आशा मरिसकेको संकेत गर्छिन् उनी ।
अहिले पनि कहिलेकाँही नानुको नम्बरमा नेपाल बाट फोन आउँछ र तथानाम गाली गर्ने गर्छन्, उनका श्रीमान् । उनको बानी नै त्यस्तो हो त्यसमा उनले गुनासो पनि गर्दिनन् । जसले जति जान्दछ र जसको दिमागले जति सोच्न सक्दछ त्यस्तै ब्यबहार गर्ने न हो । अरु कुरामा दुख नलागेपनि कहिलेकाही साथिहरुसंग नाम जोडेर तथानाम बोल्छन् उनका श्रीमान । यस बारेमा कहाँ उजुरी गर्न सकिएला ? उनी खुईय सुस्केरा हाल्छिन् ।
धाराप्रवाह बोल्न सक्ने नानुको अबको यौटै उद्देश्य भनेको छोराको भविष्य सुरक्षित पार्नु हो । त्यही छोरालाई राम्रो संग पढाउन सके उसले केही गर्ला अथवा छोरा पक्कै कतै स्थापित होला । त्यही बिषयमा बढी सोच्छिन् अचेल उनी । यो निरन्तरको आफ्नैसंघर्ष र जीवनको लडाइँबाट नथाकेरै उनी कतार आएको पाँच–छ वर्ष हुन लागिसकेको छ । पार्टी प्रति उनको खासै गुनासो पनि छैन । अहिले जत्तिको टाठीबाठी आफु छु । त्यो सबै पार्टीमा सिकेको कुराको प्रभाव हो भन्ने मान्दछिन् उनी । वर्षमान पुन संग संगै खाना खाएको अनुभव छ उनीसँग । अनि ओनसरी घर्तिसंग संगै गफगाफ गरेको अनुभव छ ।
आफुसंगै सिविरमा भेटिएका नेताहरु अहिले देशको उच्चतम पदमा पुगेको देखेर पनि उनको मनमा अलिकति डाह या इस्र्या समेत छैन । उत्तिकै शान्त भएर उनी भन्छिन् किस्मतमा जे लेखेको छ त्यत्ति मात्र पाइन्छ, त्यो भन्दा बढीको आशा गर्नु हुदैन ।
यति भएरपनि उनले आफ्नो सौखलाई बचाएकै छिन् । त्यही क्रममा उनका लोकदोहोरी एल्बमहरु बजारमा आइसकेका छन् – फूलै फुलेन, सालैजो, नुवाकोटे नानी आदि गीतहरु उनले गएका हुन् । जुन लोकप्रिय समेत भएका छन् । लोक गीतका शब्द लेख्न, भाका बनाउन र तुरुन्तै दोहोरी खेल्न पनि उत्तिकै खप्पिस छन् कमरेड सुरक्षा । दोहामा बिदाको दिन प्राय ः स्टेज कार्यक्रममा गीत गाएर नै बिताउँछिन् ।
‘सालैजो’ लोकभाका पश्चिमी भेगको भए पनि नानुले नुवाकोटे नानी बनेर यताको श्रोताका लागि पनि भाका भित्राएकी हुन् । ‘मनको बह कसैलाई नकह भन्छन्,’ कतार विमानस्थलको सेक्युरिटीको जागिर साह्रै दुख पनि छैन र अति सजिलो पनि छैन । सुटकेस बोकेर दिनहु नेपाल फर्किरहेका दाजुभाई दिदीबैनीहरुको लावालस्कर देख्दा उनलाई पनि भर्खरै उडेर जाउँ कि जस्तो हुन्छ । तर परिस्थितिका पहाडहरु निकै ठुला छन् तिनलाई छिचोल्नु बाँकि नै छ । उनले घर फर्कने सपनालाई कतै कुनामा थन्क्याउछिन् ।
कतारमा ‘ग्रुप सेक्युरिटी सर्भिस’ (जीएसएस) को जागिर उनको मुख्य काम हो । तर नानुको भित्री रुची भने भिन्नै रहेको छ । गायन उनले छाड्नै नसक्ने रहर हो । उनको त्यस्तै समाजसेवामा पनि निकै चासो छ । उनले आफ्नो रुम मा नै च्यारिटी बक्स राखेकी छन् र हरेक दिन तरकारी राशन किन्दा फर्केको छुट्टा पैसा त्यसैमा खसाउने गर्छिन् । अलिकति जम्मा हुने बित्तिकै कसैलाई सहयोग गर्न पाउँदा उनलाई अति आनन्द लाग्छ रे ।
कमरेड सुरक्षा दोहाको सामाजिक सकृयतामा पनि निकै रमाउछिन् । अहिले राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरि गीत प्रतिष्ठान नेपाल –कतार शाखाकी सस्थापक उपाध्यक्ष रहेकी नानु घले अन्य संस्थाहरुमा समेत आवद्ध रहेकी छन् । लोकगीत र दोहोरी गायनमा खुबै रुची राख्ने नानु आफ्नै जिन्दगीको कथा–व्यथा भुल्न पनि गाउने–रमाउने दुनियाँमा आएकी रहिछन् ।
प्रस्तुति – दुर्गा पंगेनी
Prevयी १० कारणले मदन भण्डारीको मृत्यु रहस्यमयमा (भिडियो सहित)
एकताको खुशीयालीमा काठमाडौँमा दीपावलीNext